काँकरभिट्टाकै घरमा बेहुली भित्राउदै रमेश प्रसाई ! – Dainik Sangalo
काँकरभिट्टाकै घरमा बेहुली भित्राउदै रमेश प्रसाई !
December 7, 2020 1203
झापा, २२ मंसिर । चर्चित वक्ता तथा गायक रमेश प्रसाईले मेचीनगर–१० काँकरभिट्टास्थित निवासमै आज बेहुली भित्राउँदै छन् । आज उनको कालिकोट घर भई काठमाडौंमा समाजसेवा गरिरहेकी नन्दा सिंहसँग धरानमा विहे भइरहेको छ । आज विहान ९ बजे काँकरभिट्टाबाटै ३ वटा गाडीमा जन्ती लिएर उनी धरान गएका थिए ।
बेहुलीलाई उनले काँकरभिट्टाकै घरमा आज बेलुका भित्राउने छन् । धरानमा बसेर अध्ययन गरेका प्रसाईको निजी घर काँकरभिट्टामा छ भन्ने धेरैलाई थाहा पनि छैन । काँकरभिट्टाको भानुटोलमा दसानो घडेरीमा उनको दुईतले घर छ । घरमा बुवा, आमा र भाइवहिनीहरु बस्दै आएका छन् ।
उनी भने धरानमै बस्दथे । धरानमा विहे हुने भएपछि धेरैले वरियात धरानबाटै आउलान् र बेहुलीसमेत धरानमै भित्राउने होला भन्ठानेका थिए । तर उनले आफ्नै घरबाट जन्ती लैजाने र बेहुली भित्राउने इच्छा गरेका थिए ।
जन्ती थोरै संख्यामा गएका छन् । विहेको वैदिक विधि पूरा गर्नका लागि काँकरभिट्टास्थित आफ्नै छिमेकी पण्डित हेमन्त अधिकारीलाई धरान लगिएको छ । जन्ती जाँदा लगाएको दौरा, सुरुवाल, कोट र टोपीमा उनी निकै खुलेका थिए, साह्रै सुहाएको थियो । निकै हतारमा रहेका उनीसँग फोटो खिचाउन भीड लागेको थियो । अपरान्ह सवा १ बजे जन्ती टोली विहेस्थलमा पुगेको जानकारी प्राप्त भएको छ । धरान उद्योग वाणिज्य संघको हलमा वैवाहिक कार्यक्रम राखिएको छ । वेहुली नन्दा सिंह काठमाडौंबाट विहेका लागि धरान आएर आफन्तको घरमा बसेका थिए ।
Prevखुशीको खबर : अब कोरोना संक्रमितलाई पाँच हजार रुपैँया दिइने
Nextआज ब‌ैबाहिक जिवनमा बाधिए रमेश प्रसाईं र स्वेता खड्का , सबैले शुभकामना स्वरुप सेयर गरौ।
प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रियसभा रोष्टमको भूइँमा थुकेपछि भाइरल